RefreshWeb SEO ဒိုင်ခွက်
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2009 တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 25, 2016 Douglas Karr
တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် John Rasco သည်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကမှယခုနှင့်ယခုအချိန်တွင် ၀ န်ဆောင်မှု (SaaS) SEO ဆိုဒ်ဒိုင်ခွက်အဖြစ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဆော့ဝဲလ်ကိုသရုပ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ နေပြည်တော် သူတို့ရဲ့ SEO အသစ် dashboard နဲ့အတူလူကြိုက်များသွားမှာပါ။ RefreshWeb သည် application ကိုပထမ ဦး ဆုံးဖောက်သည်များအနေဖြင့်စိတ် ၀ င်စားစွာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည် keyword-search engine marketing ၏အတိုင်းအတာအားလုံးကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုခြေရာခံရန်အရေးကြီးသောအချက်သုံးချက်ရှိသည် ရှာဖွေမှုပမာဏ သော့ချက်စာလုံးနှုန်း, သင်၏ လက်ရှိရာထူးနှင့် volumes ကို (နှင့်ဆွေမျိုးရှယ်ယာ), နှင့်သင်၏ သမိုင်းဆိုင်ရာရာထူး (မင်းကမြေပြင်ကိုရ၊ ငါသိသည်အတိုင်း, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို 'စျေးကွက်' အဖြစ်ရှုမြင်ပြီးသင်၏ရာထူးကိုစျေးကွက်သို့ဘာသာပြန်ပေးသောအခြားမည်သည့်ထုတ်ကုန်မျှမရှိ ဝေစု။ RefreshWeb သည်၎င်းကိုရိုးရှင်းသော်လည်းအစွမ်းထက်သောသတင်းပို့လွှတ်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ စိတ်ကြိုက်သော့ချက်စာလုံးစာရင်း သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်ထားတယ်၊ နောက်ဆုံးသင့်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးသင်အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တယ်။ အချက်အလက်များ၏လိပ်စာများကို ဖြတ်၍ ကောက်တော့မည်မဟုတ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တိုးတက်လာပုံနှင့်ကြီးထွားမှုအတွက်အခွင့်အလမ်းအသစ်များစောင့်ဆိုင်းနေသည့်နေရာကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ RefreshWeb SEO Management Dashboard သည်၎င်းကိုခြေရာခံသည် အရေးပါကြောင်းမက်ထရစ်:
အဓိကရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ၅ ခုတွင်စျေးကွက်ရောက်ရှိနိုင်သည်
SEO သည်လက်ရှိနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များအတွက် software ရေးသားခြင်း
အဓိကရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ၅ ခု၏အဆင့်များသည်ရှာဖွေမှုပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
In-depth SEO ဆိုသည်မှာ analytics တစ်ခုချင်းစီကိုသော့ချက်စာလုံးသည်
တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၅၀ (အပတ်စဉ်အသစ်ထပ်မံဖြည့်တင်းသော) အထုပ်နှင့်အစီရင်ခံစာ ၅ ခုစံသတ်မှတ်သည်။
အဆိုပါ TASMReach ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏မူလစာမျက်နှာ (စုစုပေါင်းရရှိနိုင်သည့်ရှာဖွေမှုစျေးကွက်? TASM?) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သက်တမ်းတစ်ခုစီအတွက်ရရှိသော TASM ရာခိုင်နှုန်းနှင့်လက်ရှိရှာဖွေမှုပမာဏကိုပြသည်။ ဇယားမှာပါတဲ့ဝေါဟာရအပေါ်မူတည်ပြီး Mousing ကိုဇယားမှာပြထားပါတယ်။
အဆိုပါ GoogleRankings ရလဒ်များကိုဖော်ပြရန်တူညီသောနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်သင်ကလက်လှမ်းမမီသည့်နေရာတွင်အဆင့်များကိုသာကြည့်သည်။ US ၏အဓိကရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ၅ ခုလုံးကိုခြေရာခံလိုက်သည်။
အဆိုပါ SEOProgress အစီရင်ခံစာ အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုကိုယ်စားပြုသည့်ထိပ်ဆုံးရှိဘားဂရပ်နှင့်အတူစနစ်ရှိမည်သည့်ရက်စွဲမှမဆိုရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်သည်။ ဘားဂရပ်ရှိဘားတစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းသည်ထိုရလဒ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်ရှာဖွေမှုစကားလုံးကိုပြသည်။
အဆိုပါ သော့ချက်စာလုံးရေစီးကြောင်း အစီရင်ခံစာသည်ရက်သတ္တပတ် ၅ ပတ်ကြာခြေရာခံခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများဖြင့်လက်ရှိရက်စွဲအတွက်အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ သို့မှသာလမ်းကြောင်းသည်ရွေ့လျားနေသလားသို့မဟုတ်ကျဆင်းသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ မည်သည့်အသုံးအနှုန်းအတွက်မဆိုအပတ်စဉ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်အမေရိကန်ရှိ Google ၏အချက်အလက်များစင်တာ (၁၉) ခုကဲ့သို့အချက်များအပေါ် မူတည်၍ တွက်ချက်သည်။ စသည်တို့သည် Googlebot သည်ညွှန်းကိန်းတွင်ရှိသည်။ သငျသညျတစ်ခု Anomaly သို့မဟုတ်ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။
အဆိုပါ အကျဉ်းချုပ် ဇယားသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်မှုကိုပြသရန်အလွန်ကောင်းသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သတင်းပို့ခြင်းကိုမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားရန်ကူညီသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုစနစ်ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် SEO နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောတစ်စုံတစ် ဦး သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသုံးပြုရန်ခက်ခဲသည်။
RefreshWeb SEO စီမံခန့်ခွဲမှု Dashboard ကို web marketers များအတွက် web marketers မှတည်ဆောက်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး SEO နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးသောအစွမ်းထက်သော SEO စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် analytics အသုံးဝင်သော, လုပ်ဆောင်နိုင်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မင်းကြည့်နိုင်တယ် RefreshWeb ဝန်ဆောင်မှုရှိဗီဒီယို အဖြစ်ကောင်းစွာ။
RefreshWeb အဖွဲ့ရှိရွှေစျေးကွက်တွင်ကြေးပေးသွင်းမှုသည်အီးမေးလ်အခြေခံအထောက်အကူဖြင့်ပါ ၀ င်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများကိုတီထွင်ထားသောတုတ်ကျင်းများနှင့် SEO စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုမှကျွမ်းကျင်သူအကြံဥာဏ်? ဒါကခက်ခဲတဲ့ combo ပါပဲ။ မင်းပို့စ်ကိုဒီမှာဖတ်လိုက်တာဂျွန်သိပါစေ Martech Zone!
Tags: ဂူဂဲလ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သုံးပုံသုံးနည်းသော့ချက်လန်းseo တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာseo tool ကို refreshweb seoနင်
ThinkVine နှင့်အတူခန့်မှန်းစျေးကွက် Analytics မှ
30:2009 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 38
အိုး၊ ငါ့သူဌေးက ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်အသစ်ကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်။ ဒီပို့စ်ကို သူမဆီ ထပ်ဆင့်ပို့မယ် ၊ အချက်အလက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ ကြည့်ကောင်းတယ်။
30:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 7, 47
RefreshWeb SEO ဒက်ရှ်ဘုတ်သည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး အသုံးဝင်သည်မှာ သေချာပါသည်။ သန့်ရှင်းသော အင်တာဖေ့စ်သည် လုပ်ဆောင်ချက်ကို တွန်းအားပေးရန် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော နည်းလမ်းများဖြင့် အလေးထားသော မက်ထရစ်မန်နေဂျာများကို တင်ပြသည်။ သုံးဖူးတယ်၊ ကြိုက်တယ်။
4:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 05
'စျေးကွက်ဝေစု' ၏အမြင်ဖြင့် Search ကိုကြည့်ရှုရာတွင်လည်း ၎င်းတို့သည် မျဉ်းကွေးထက် ကျော်လွန်နေသည်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် နောက်ဆုံးတွင် ထိုနေရာတွင် ရှိနေကြလိမ့်မည်- သို့သော် တစ်စုံတစ်ဦးမှ ဦးဆောင်ထွက်လာသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်မှာ ကောင်းပါတယ်။
2:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 2, 17
ကြည့်ကောင်းသည်! ဖောက်သည်များအတွက် သင်၏ SEO ဒက်ရှ်ဘုတ်ကို ကျွန်ုပ်၏ hotlist စာရင်းတွင် ထားရှိပါမည်။
RefreshWeb မှလူများသည် @Kryanoutloud နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသည်။